Iyamaa Faa’iiddo Jooga – somalilandtoday.com
markii la xidhay waxa kor u kacday dhagaysiga ama daawashada sugaantiisii hore iyo kuwii xalay, qof waliba wuxuu xiisaynayey inuu ogaado wixii lagu xidhay ee uu abwaanku yidhi.
sida ay SNM ugu faanto SNM-nimada ayuu isna ugu faani doona inuu damiirkiisu diiday inuu wax
Dawladnimada iyo dimuqraadiyadaba ceebay ku tahay qof baa hadlay oo la xidhay,taasina waxay fool xumo u keenaysa aragtidii caalamku inaga qabay inay hoos u dhacdo ayey sababaysaa.
Wixii aynu ku faani jirnay ee xoriyatul qawlka iyo inuu qof kasta dareenkiisa cabiro karo ee dastuurku damaanad qaadayna calaamatul su’aal bay galinaysaa oo dastuurkii waxay ka dhigaysa waraaqo la iska qortay oo aan shaqaynayn.
Dalalkii ina taageeri jirey iyo beeshii caalamka ee dimuqraadiyadeena dhaqaalaha ku bixin jirtay ee caalamka kale ka dhaadhicin jirey dal yar oo aan la aqoonsan baa jira Afrika ka jira oo dimuqraadi ah waji gabax bay ku noqonaysaa.
Warka xun ayaa ka dheereeya warka fiican, boqolkii fiicnaa ee aynu qabsanay waxa laf jab ku noqonaysa xadhigaasi abwaanka.
Hay’adaha xuquuqda aadanaha u doodda waxay xadhigaasi gaadhsiinayaan meel kasta oo ay sheegayaan in Somaliland xoriyatul qawlkii iska daysay kuna sii socoto nidaamkii digtaytarka oo kale., waxaas oo fadeexadana gacanteeda waxa ku abuuranaysa waa xukuumadda.